“RDJ Mozika”: mpanakanton’ny taona 2018 i Shyn sy i Tence Mena | NewsMada
“RDJ Mozika”: mpanakanton’ny taona 2018 i Shyn sy i Tence Mena
Par Taratra sur 04/02/2019
Nafana ny lanonana satria ankoatra ny fanolorana amboara sy mari-pankasitrahana, naka endrika fampisehoana ny “RDJ Mozika” tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Imahamasina. Nahazo valim-babena ireo mpanakanto voafidy tao anatin’ny maro…
Tontosa, ny asabotsy 2 febroary teo etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahatena Imahamasina ny RDJ Mozika. Lanonana tontosain’ny onjampeon’ny tanora (RDJ) hoentina mankasitraka ny mpankanto malagasy. Taorian’ny fifidianana samihafa nataon’ny mpihaino io radio io, voafidin’ny « RDJ Mozika » ho mpanakanton’ny taona 2018 i Shyn sy i Tence Mena. Raha ho an’i Shyn, tsy nahagaga loatra io vokatra io satria efa voaporofo teo amin’ny fifaninanana isan-tsokajy ny fankafizan’ny olona azy. Norombahiny ihany koa mantsy ny amboara “Mozika duo/trio”-n’ny “Mozika afro-tropical”, tamin’ity hetsika ity. Toraka izany ihany koa i Tence Mena izay nanao pao-droa
Ankoatra ireo nifaninana, nisy ireo nomena mari-pakansitrahana manokana. Anisan’ireny i Jaojoby. Notolorana ny amboaran’ny mpanakanto be mpangataka indrindra kosa i Big MJ. Teo koa ny amboaran’ireo nanao fitafy nanaitra indrindra izay lasan’i Jess Flavi One sy i Melky.
Ankoatra ny fanolorana amboara sy mari-pankasitrahana, fampisehoana ihany koa ny “RDJ Mozika”. Nandray anjara tamin’izany ny Tambour Gasy, i Jaojoby, i Tence Mena, i Boy Black, i Dalvis, ny tarika Mage 4, i Johane ary i Nate Tex. Nanentana sy nanome aina ny fiarahana teo amin’ny teny an-tsehatra sy ny mpijery kosa i Honorat sy i Barhone. Nitondra ny teny fankasitrahana ny mpanohana sy ny mpanakanto ary ny mpihaino sy mpijery ny tale jeneralin’ny RDJ, Rasolojaona Tahiana.
Ireo nahazo fankasitrahana isan-tsokajy:
“Mozika duo/trio”: Shyn-Denise – “Révélation feminine”: Johane – “Révélation masculine”: Mario – « Mozika variété » : Elidiot – “Mozika variété mihetsika”: Vaiavy Chila – “Mozika afro trôpical”: Shyn – “Mozika mafana”: Jerry Marcoss – “Mozika milamina feminin”: Black Nadia – “Mozika milamina masculin”: Nate Tex – “Mozika afro trap”: Dalvis – “Mozika afro beat”: Black Nadia, Dalvis, Stephanie, Denise, Tence Mena, Lion Hill – “Mozika afro zouk”: Boy Black – “Mozika afro beat”: Tence Mena – “Mozika rap”: Tsota – “Mozika RNB”: Raboussa – “Mozika Rock”: Ambondrona – “Mozika fiderana”: Joseph d’Af – “Mozika buzz”: Bolo Pixx – “Mozika cover”: D-Lain – “Collaboration de l’année”: Rak Roots-Quatuor Squad – “Producteur de l’année ”: Ivenco